Rehefa manao fanatanjahan-tena amin'ny herinandro 21 herinandro, vehivavy iray dia afaka maheno avy amin'ny dokotera momba ny toerana ambany. Tsy ny renim-pianakaviana rehetra no mahafantatra an'izany. Hilaza momba izany isika ary hitoetra amin'ny antsipirihany mikasika ny zava-doza aterak'izany fanitsakitsahana ny fizotry ny fitondràna sy ny tokony hatao ho an'ny vehivavy manana andraikitra ambany.
Inona no tiana holazaina amin'ny hoe "toerana ambany misy ny placenta"?
Io trangan-javatra io dia voamarika amin'ny tranga raha ny toeran'ny zaza dia mifatotra amin'ny tranokala ambany fa ambany, ary manapaka ny fidirana ao anatiny. Amin'ny ankapobeny, ny placenta dia tokony ho hita eo amin'ny sehatry ny tahirin-tsakafo. Ao no misy ny fepetra tsara indrindra amin'ny fampiroboroboana ny rà uteroplacental. Izy io dia miaraka amin'ny fanampian'io fanabeazana anatomika io izay mifandray amin'ny taolan-damosin'ny renim-pianakaviana ary manome azy ireo ny sakafo ilaina rehetra.
Raha miresaka momba ny elanelana misy ny placenta mankany amin'ny tranonjaza misy ny tranonjaza, izay tokony ho ara-dalàna dia 6 cm farafahakeliny. Noho izany, eo amin'ny 5.5 santimetatra ny vehivavy dia voamariky ny "lozabe ambany" ary nalaina mba hifehy.
Inona no antony mahatonga ny zaza tsy hibanjina ny toeran'ny zaza?
Raha takatrao ny dikan'ny teny hoe "fihomehezana ambany", dia ilaina ny manonona ny antony fototra amin'ny fampandrosoana an'io fandikan-dalàna io. Ny ankamaroan'izy ireo dia:
dingana fanalefahana ny rafitra fananahana;
fanalan-jaza ao amin'ny anamnesis;
paozin'ny rafitry ny tranonjaza;
tsy fahombiazan'ny mucosa endometrial;
Raha ny marina, ny antony mahatonga ny fampandrosoana an'io fanitsakitsahana io dia lehibe kokoa, izay matetika mahatonga ny aretina ho sarotra.
Ahoana no tokony hitondran'ny vehivavy ny fihomehezana?
Rehefa avy nanao famandrihana toy izany izy dia mahazo toro-marika maro avy amin'ny dokotera sy ny torolàlana ny vehivavy bevohoka, izay tsy maintsy arahina tanteraka. Noho izany, ny renim-pianakaviana izay misy karazana fandikana toy izany dia mifanohitra fotsiny:
hetsika ara-batana maharitra;
ny fihenjanana nateraky ny alahelo sy ny toe-javatra miteraka;
fiara fitateram-bahoaka lava.
Ny firaisana ara-nofo miaraka amin'ny fihomehezana ambany, ary ny antitra ihany koa dia mifanohitra. Ny zavatra dia amin'ny fifandraisana eo amin'ny firaisana ara-nofo dia misy ny fiantraikan'ny aretina amin'ny rafitra fananahana, ary koa ny fanehoam-pitiavana dia mety hitarika mankany amin'ny familiana, ny familiana ny placenta ambany.
Amin'ny toerana ambany dia tokony hanara-maso akaiky ny fiovan'ny vatany ny vehivavy iray ao anatin'ny 21 herinandro. Tokony hodinihina manokana ny fitsaboana amin'ny vaginal. Rehefa misy ratra sasantsasany aza indraindray dia mila mampahafantatra ny dokotera momba izany ianao. Amin'ny ankapobeny, amin'ny toe-javatra toy izany, ny reny mitaiza dia tonga hopitaly, izay manome alalana ny fahasalamany amin'ny dindony.
Araka ny efa voalaza tetsy aloha dia tokony ho voafetra ihany ny fampiharana ara-batana. Na izany aza, misy manam-pahaizana sasany milaza fa, amin'ny fanitsakitsahana tsy ara-dalàna, dia mety hanatsara ny fifindran'ny placenta ny asa sasany, ary hanafoana tanteraka ny fandikana. Ohatra, ny vehivavy bevohoka dia nodidiana hanao fihetsiketsehana mihenjana, mitsangana eo amin'ny voditongotra rehetra . Ny fanindriana dia eo amin'ny elany, fa tsy ny borosy.
Inona ny fitsaboana ny fihazonana ambany amin'ny vehivavy bevohoka?
Noho izany dia tsy atao ny fitsaboana manokana momba ity fanitsakitsahana ity. Ny vehivavy dia eo ambany fanaraha-maso akaiky an'ireo mpitsabo, mandinika matetika ny ultrasound, izay mamela anao hanombantombana ny hetsiky ny toerana misy ny ankizy. Ao amin'ny 9 amin'ny 10 amin'ny tranga, ny placenta ambany dia manana vokatra tsara.
Amin'ny toetry ny tsy fahampian-tsakafo, hita hatramin'ny 21 herinandro vohoka, ny fahaterahana dia manana ny toetrany manokana. Rehefa jerena ny elanelana kely misy ny tranonjaza sy ny placenta, ny mpitsabo dia manindrona ny bala, ary mametraka ny placenta amin'ny fanampian'ny lohan'ilay zazakely. Ilaina izany mba hisorohana ny fahatongavana mialoha ny toerana misy ny ankizy. Miaraka amin'ny fanakatonana tanteraka ny fidirana amin'ny tranokala, - ny fizarana fizarana vonjy aina dia voatondro .
Rà nandritra ny fitondrana vohoka
Mifepristone - torolàlana ampiasaina amin'ny famongorana ny fitondrana vohoka
Calceminum nandritra ny fitondrana vohoka
Ahoana no mahatonga ny tratra mandratra mandritra ny fitondrana vohoka?
Geneferon nandritra ny fitondrana vohoka
Nahoana ny vehivavy bevohoka no mitaona ny vavony?
Mukaltin amin'ny bevohoka - 1 term
Paska fahatsiarovana amin'ny tananao manokana ho an'ny ankizy
Ahoana ny fomba hampianarana ankizy iray hijoro ho azy?
Bree Larson dia hanambady mpihetsiketsika
Sakafo avy amin'ny lentila - tsara sy ratsy
Ankizivavy ary manintona ny taona 2015
Lady miaraka amina alika: 10 karazana namana tsara indrindra ho an'ny vehivavy
Lamina fafana ho an'ny vata fampangatsiahana
Aquarius dia toetra
The Garden of Botanical Garden
Goroshnitsa - ilay resipe